CHINAPLAS2018 Yakanaka Zvishandiso- PVC Inokurumidza Kuunganidza Bhodhi Extrusion Line - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
CHINAPLAS2018 Yakanaka Zvishandiso- PVC Inokurumidza Kuunganidza Bhodhi Extrusion Line
Iyi extruder ine mukana wekushandisa yakaderera simba, yakakwira chinzvimbo, yakagadzikana zvinhu extrusion uye hwakareba hupenyu hwebasa.
2,vaccum calibration unit
2.1 Zvichienderana nehupamhi, kududzirwa kwetafura yekuenzanisa ndeiyi: YF300, YF400, YF600 ..
2.2Iyo tafura yekumusoro inogona kufamba kumusoro uye pasi, kurudyi uye kuruboshwe nemagetsi kutonga. Ichi chishandiso chine zvakare chinzvimbo-kudzikamisa chishandiso uye emergency emergency bhatani.
2.3Iyo inotonhorera yemvura uye calibration system chinhu chakakosha kuita shuwa iyo yakajeka nzvimbo uye inotsvedza & kupenya pamusoro uye kuwedzera kugona.
3.1 Kubva pahupamhi, kududzirwa kweiyo hual-off unit ndeiyi: YF300, YF400, YF600 ..
3.2 Iyo yekukwevera-kure yuniti inosangana zvakananga nemota uye ine chinzvimbo-kudzikamisa chishandiso uye emergency bhatani mudziyo. Mabhanhire ari maviri kumusoro uye pasi anodzorwa ne frequency invertor.
Uyu mucheki ane kugona kwakanyanya uye nekukurumidza kucheka mhinduro. Nzvimbo yekucheka yechigadzirwa yakachena uye yakashambidzika uye hapana chikonzero chechipiri chekugadzirisa.
5.1Iyi stacker inonyanya kuita otomatiki uye inoshanda nekukurumidza, iyo inogona zvakare kuchengetedza mutengo wevashandi.
6.1 PVC wallboard inoburitswa kubva kune iyo extruder PVC substrate, uye wozoshandisa iyo yekupfeka unit kuita iyo PVC vara firimu imwe-nguva yekudhinda-yakavharwa. Maitiro ayo akareruka, anonamirwa neglue inochengetedza zvakatipoteredza, isina hwema, isina chepfu, hapana Kusvibisa.
6.2 PVC yakasanganiswa wallboard density: 0.8-1 tani / m3
6.3 PVC Yakabatanidzwa Wallboard Makomborero:
1) Isina mvura uye hunyoro chiratidzo. Inogadzirisa zvakanyanya dambudziko rekuti zvigadzirwa zvehuni zvinokodzera kuora nekukura uye kuumbika mushure mekunyorova uye zvinogona kushandiswa munzvimbo isingagadzirisike zvigadzirwa zvehuni zvetsika.
2) Kudzivirira zvipembenene nemujuru, zvinobudirira kubvisa kushungurudzwa nezvipembenene uye kuwedzera hupenyu hwavo hwebasa.
3) Rakajeka uye rinowanikwa mune mazhinji mavara. Haingori chete nehunhu hwepanyama uye huni hunyoro, asi zvakare inogona kugadziridzwa zvinoenderana neyavo vara ravanoda.
4) PVC yekushongedza mapaneru ane huremu huremu, kupisa-kudziisa, kupisa-kuputira, hunyoro-chiratidzo, moto-unodzivirira, acid-base base, uye ngura-isingagadzirike.
5) Kugadzikana, dielectric, yakasimba, anti-kukwegura, nyore kusungira uye chisungo.
6) Flexural simba uye rova ​​kuoma, yakakwirira elongation panguva pakakoromoka.
7) Iyo yepamusoro inotsvedzerera, inopenya muvara, yakashongedza kwazvo, uye ine akasiyana maficha ekushongedza.
8) Iyo yekuvaka maitiro ari nyore uye ari nyore kuisa. Iyo ficha inoshandisa fomati ine hushamwari fomura iyo isina chinokuvadza chinomiririra
KUMASHURECHINAPLAS2018 Yakanaka Zvishandiso- PVC Matatu Matanho Co-extruder Line
NEXTCHINAPLAS2018 Yakanaka Zvishandiso- Plastiki Geogrid Extrusion Line